Ihe gbasara okike: ụmụ ọhụrụ na-ebe akwa na-akpalite mmeghachi omume dị iche iche sitere n'aka ndị nwoke na ụmụ nwanyị - Ụwa 2022
Ihe gbasara okike: ụmụ ọhụrụ na-ebe akwa na-akpalite mmeghachi omume dị iche iche sitere n'aka ndị nwoke na ụmụ nwanyị
Nwa amụrụ ọhụrụ nwere ahụike nwere ike ibe ákwá ihe ruru awa abụọ ebe a mara na ụmụ ọhụrụ na-akpa ike na-aga n'akwụsịghị akwụsị ruo awa anọ. Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụ nne na nna na-enyere aka.
Mana ntakịrị nnyocha e mere ndị okenye 18 nke National Institutes of Health (NIH) mere na-egosi na ọ bụ naanị ụbụrụ ụmụ nwanyị na-adị ka ọ siri ike ịzaghachi mkpu ndị a.
Mgbe ha gwasịrị ndị nwoke na ndị nwanyị ka ha hapụ uche ha kpafuo, ndị nchọpụta kpọnyere ndekọ nke ụda ọcha nke jikọtara ụda nwa ọhụrụ na-ebe ákwá. Nyocha ụbụrụ gosiri na ụbụrụ ụmụ nwoke ka nọ na ọnọdụ izu ike. Ka ọ dị ugbu a, ọrụ ụbụrụ na-arụ n'ime ụmụ nwanyị gbanwere na mberede na ọnọdụ nlebara anya mgbe ha nụrụ mkpu nwa ọhụrụ.
Kpọmkwem, mpaghara dorsal medial prefrontal na azụ cingulate amaara na ọ na-etinye aka n'uche na-awagharị ("iyi nsụhọ") bụ mpaghara ndị e dekọrọ site na onyonyo resonance magnet arụ ọrụ (fMRI) wee mụọ ọmụmụ maka nsonaazụ.
"Ịchọpụta ma nzaghachi ndị a dị iche n'etiti nwoke na nwanyị, site na afọ, na ọnọdụ nne na nna, na-enyere anyị aka ịghọta mmuo maka ilekọta ndị na-eto eto," ka onye na-ede akwụkwọ bụ Marc H. Bornstein, Ph.D., si National Institute kwuru. nke Health Child and Human Development (NICHD).
Ọ bụ ezie na usoro ọrụ ụbụrụ dị iche n'etiti nwoke na nwanyị, ọ dịghị ihe dị iche na usoro ụbụrụ n'etiti nne na nna na ndị na-abụghị nne na nna.
Ndị nchọpụta ahụ mekwara mkpu ákwá nke ụmụ ọhụrụ ndị e mesịrị chọpụta na ha nwere autism. Ịnụ mkpu ndị a na-eme ka ọ kwụsị ịkpagharị uche nke ma ndị nwoke ma ndị nwanyị. Nnyocha e mere na mbụ chọpụtara na mkpu ụmụ ọhụrụ na-etolite ASD na-adịkarị elu karịa nke ụmụ ọhụrụ ndị ọzọ nakwa na nkwụsịtụ n'etiti mkpu dị mkpụmkpụ.
Dr. Bornstein jikọrọ aka na Nicola De Pisapia, Ph.D., Simona DeFalco, Ph.D., Paola Venuti, Ph.D., na Paola Rigo, niile sitere na Observation, Diagnosis and Education Lab na Mahadum Trento, Italy., na Gianluca Esposito, Ph.D., nke RIKEN Brain Science Institute, Japan. Nchọpụta sitere na ọmụmụ ha, nke NICHD kwadoro, pụtara na NeuroReport.
N'ime nnyocha e mere na mbụ, ndị nchọpụta chọpụtara na ịhụ ihe oyiyi nke ihu nwa ọhụrụ yiri ka ọ na-eme ka ụbụrụ ụbụrụ na-arụ ọrụ nke na-egosipụta nkwadebe maka mmegharị na ikwu okwu yana mmetụta nke ụgwọ ọrụ. Ụdị ọrụ dị iche iche pụtara na ụbụrụ ndị okenye na-ekiri ihe oyiyi nke ihu nwa ọhụrụ - ọbụlagodi mgbe nwatakịrị ahụ na-abụghị nke ha.
Ụkpụrụ a bụ kpọmkwem maka ịhụ ụmụ ọhụrụ mmadụ. Otu ihe omume ahụ apụtaghị mgbe ndị sonyere na-ele foto ndị okenye ma ọ bụ anụmanụ, ọbụna ụmụ anụmanụ.